NASA oo faafaahin K Bixisay Kowkab Dulka U Eg Oo Lagu Noolaan Karo | Xaqiiqonews
NASA oo faafaahin K Bixisay Kowkab Dulka U Eg Oo Lagu Noolaan Karo
Wakaaladda Mareykanka ee qaabilsan Xiddigiska, NASA ayaa iclaamisay, in la helay kowkab dhulka u eg oo masaafo u jira qoraxda, waxeyna sheegeen in kowkabani uu qoraxdiisa u jira masaafo dhan inta ay qoraxda iyo dhulka isku jiraan, taasi oo suurtagileneysa in lagu dul noolaado.
Kowkabkani oo lagu magacaabo Kepler 452, aya lagu argay telescope-ka Mareykanka ee Kepler, waxa uuna ka fogyahay dhulkeena 1400, iftiin sanadeed(light year). waxa uuna kowkabani ku dul wareegaa qoraxdiisa 385 maalin, taasi oo ka dhigeysa mid u eg kowkabka dhulka oo ku dul wareegistiisa qoraxda ay tahay 365 maalmood.
Waxa ay Culimada carrabka ku adkeynayaan in kowkabkani uu yahay kan ugu egeensho dhaw dhulka, waxeyna xaqiijiyeen in la helaayo biya dareero ah oo oogadiisa saaran, arinkaasi oo suuragelinaya in lagu dul noolaado.
Laakin in waqtigan la dul tago kowkabka Kepler 452, ma ahan mid fudud, taasina waxaa sabab u ah fogaanta uu noo jiro ee ah 1400 iftiin sanadeed (light year), tani micnaheedu waxa uu yahay in loo safro kowkabkani waxa ay qaadaneysaa 26 milyan sano.